10 Soo-jeedin oo lagu hagaajinayo Digg | Martech Zone
Jimcaha, Sebtember 22, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Bogga guriga looma bartilmaameedsado aniga sidoo kale looma bartilmaameedsado wax ka qabashada warbaahinta bulshada gabi ahaanba. Boggeyga 'Digg' waa inuu leeyahay godadkii ugu dambeeyay ee saaxiibkay, qodahaygii ugu dambeeyay, iyo sidoo kale qaybaha kale ee waxyaabaha aan ku dari karo (nooc ahaan, iwm.)
"Digg wuxuu ku saabsan yahay…" waa meel lumin. Meeniska kor u qaad. Haddii aan rabo inaan ogaado waxa loo yaqaan 'Digg', geli iskuxirka. Waxaad la wareegeysaa hanti ma guurto oo aad u qaali ah.
Faallooyinka Pro / Con Waxaan jeclaan lahaa inaan arko qofka leh faalooyinka ugu fiican MAWDUUCA, iyo yaa leh maaddada ugu fiican LAGA HELO. Aynu bilowno khilaafka. Faallooyinka aan dhammaadka lahayn waa faa'iido la'aan.
Halkee ayaan ku kala sareeyaa? Anigu ma ihi qodaal weyn… laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado halka ay sheekooyinkeygu ku kala qoran yihiin bogga guud. Waa kuwee 10ka qodayaal ee ugu sareeya?
Ka takhalus banner-ka weyn ee Diggnation Podcast banner. Sheesh speaker hadl yar oo fiican ayaa soo jiidan kara dareenka Podcast-ka.
Daar xanta, laga yaabee sheeko ku saabsan Diggs-yada ugu firfircoon. Ku soo jiito bulshada waqtiga dhabta ah.
Tags, tags, tags. Qaybahaagu waxay nuugaan. Runtii way sameeyaan. Maxaad ugu oggolaan la’dahay dadka inay calaamadeeyaan qoraalladooda si aan ugu biiro “CSS” (tusaale ahaan).
Sheekooyinka soo socda? Sidee ku saabsan Sheekooyinka Dhaqdhaqaaqa Degdegga ah? Waxba igama gelin sheekada curyaannimada ee soo socota. Laakiin haddii ay heshay 10 qashin daqiiqado gudahood… maxaa diidaya in lagu dardar geliyo dardargelinta?
API? Waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro sheekooyinka aan Dugg ama aan u gudbiyey degelkeyga. RSS waa cadaalad xadidan… laakiin an API waxay ii suurta gelin laheyd inaan sameeyo codsiyo.
Digniinta Digg. Marka saaxiibaday sheeko qodaan, sidee ku heli weyday digniin?
Sep 22, 2006 at 4: 47 PM
Qodobka 8: gebi ahaanba waa ku raacsanahay. Waxa kaliya ee kaxun aragtida isla sheekooyinka bogga hoyga Digg maalintii oo dhan ayaa lagu arkayaa sheekooyin dhexdhexaad ah / cabsi / argagax leh oo ku saabsan bogga soo socda.
Qodobka # 7 waa runtii wax laga xumaado. Qaybahoodu waa SO xadidan yihiin, waxaan ku qasbay inaan xoogaa alaab ah geliyo Offbeat News sababtoo ah qeybaha oo maqan.
Nov 15, 2006 saacadu markay tahay 4:46 PM
Marka la eego sheekooyinka soo socda, waxaa suurtagal ah in lagu kala sooco sheekooyinka soo socda kuwa ugu caansan halkii laga heli lahaa kuwa cusub. Waxaan u arkaa inay taasi tahay hab fudud oo lagu arko waxa ugu kulul ee soo socda ee ku soo dhacaya xilligan.
Waxaan rajeyneynaa inay taasi tahay xoogaa caawimaad ah. 🙂
11, 2006 at 4: 26 PM
Weydii oo waad heli doontaa (marka loo eego # 10):
Walaalayaal waad salaaman tihiin… haddii aad xiiseyneyso degel lagu daabaco sheekooyin, taas oo aad uga kalsooni badan kana aamin badan Digg iskuday Profigg.com Waa mashruuc cusub oo ka caawin doona dhexdhexaad iyo yar yar gaar ahaan kor u qaadista sheekooyinka haddii kale aan waligood helin muuqaal
Nov 5, 2009 at 5: 04 AM
Gebi ahaanba waan ku raacsanahay. Waxaan ku dhejiyay xiriiriyeyaal aad u badan qoraalkayga 'Digg'. Laakiin, ma awoodo inaan ku kordhiyo digg. Waxaan rajeynayaa in qaababkani ay wax badan iga caawin doonaan.